Author: Grorg Dilkree
Bulsho dawtuurka iyaga aya hormariya deegaankooda, Xubinta Golaha Wakiilada loo qaban maayo, waxna loogu qaadi maayo arrin uu ogaaday ama uu Golaha soo hor-dhigay ama arrimo uu ra’yi ka dhiibay. Khiyaamo Qaran High Treason ama. Haddii uu Golaha Guurtidu oggolaan waayo ama ku soo jawaabi waayo bil gudaheed, mashruuc-sharcigu wuu ansaxaya, sidaas ayaana Madaxweynaha loogu gudbinayaa. Mabaadi’da talo-wadaagga iyo hannaanka xisbiyada badan.
Sidoo kale xaruntu waxay mahadcelinaysaa Dowladda Puntland iyo Shakhsiyaadkii ka geystey gacanta farsamo, maaliyadeed ambabixinta odeyaasha iyo wax-garadka aaday deegaanka si loo xakameeyo colaadda. Xubinimada Golaha Wakuda waxa la waayi karaa haddii: CadaaladHorumar iyo Ictiraaf. Ciidammada tababarka ku qaadanaya xerada Turkiga uu dhawaan ka furey Muqdisho, ayaa la sheegay qorigan inay adeegsan doonan, sidda lugu baahiyay Warbaahinta Turkiga.
Wadooyinka Muqdisho qaarkood waxaa lagu kordhiyey in jidka dhexdiisa laga sameeyo taakooyin baabuurta hakisa.
Qofku wuxuu xaq u leeyahay in la nabad galiyo jidhkiisa; ciqaabta cudub iyo wax yeelo kasta oo loo geysto way reebban tahay. Hab-maamuuska Madaxda Sare ee Qaranka. Ninka dalagga beeriyo dhirtaa duhurki loo aayo Dableydiyo ninkaa ciidamada aan dayicin jeerna Oo ay dadweynuhu rabaan duhur inoo dhaarsha.
Waxa waajib ah inuu oggolaansho Golaha Wakiilada ka helo qof kasta oo dzstuurka magacaabo Wasiir, Wasiir-ku-xigeen, iyo Madaxda Hay’adaha Dawladda, iyadoo la raacayo Dastuurka. Jideynta cashuuraha, takaaliifta, iyo tallaabooyin kale oo kor Ioogu qaadayo dakhliga.
Xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa Shareecadda lslaamka; waxaana reebban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda. Dawladdu waxay horumarinaysaa habka taakulaynta, caymiska iyo badbaadinta shaqaalaha waxaanay xoojinaysaa hay’adaha ku shaqada leh.
Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka. Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo horjeeddaa falalka argagaxis-nimada iwm, ujeeddo kasta ha lahaadeene. Caweyskii ciidda iyo dhalinta Iftiin Dev Org oo idin leh cussub mubaarak Dawladdu waxay dhiirri-gelinaysaa wax-soo-saarka wadaniga sida beeraha, xoolaha nool, kalluunka, macdanta, faleenka, xabagta iyo warshadaha ku shaqeeya wax-soo-saarka wadaniga ah.
Waxaa maanta la soo gabagabeeyay shirkii Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah uga socday magaalada Muqdisho. Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan miisaaniyadda ku jirin. Haddii uu ku dhaco xukun ciqaabeed oo kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday.
Arrimaha ku xusan faqradda laad ee qodobkan waxa ka reebban meelaha ama waqtiyada xeerku ka reebo mariddeeda ama degitaankeeda. Eedaysanuhu wuxuu xaq u Ieeyahay in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa. Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi.
Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka. Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Xilka xeer-dejintu uma wareegi karo cid ka baxsan Baarlamaanka. We’re working on a modern railway network.
Aafooyinka dhaca sida abaaraha, duufaanada, cudurrada faafa, dhul garurka iyo dagaalada waxay Dawladdu ka yeelanaysaa ku-talagal. Said dani waa danayste aan mudnayn in la doorto ee ay tahay in qori dheer la isaga qabto.
Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Oggolaanshaha cafiska iyo saamaxaadda, oo ay ka reebban yihiin qisaasta iyo xuduudda Shareecadda lslaamka; iyo bixinta magangelyada siyaasadeed, ka dib marka uu la tashado hay’adaha ku shaqada leh.
Islaamku castuurka Diinta Dowladda.